Global Voices teny Malagasy » Myanmar: Fanentanana ‘Vonjeo ny Valantsika’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2013 8:23 GMT 1	 · Mpanoratra Chan Myae Khine Nandika zhhantar
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Tontolo_iainana
Te hamindra toerana ny Valan-javaboahary Yangon , izay isan'ny marika namantarana ny tanàna hatramin'ny 1906 ny governemantan'i Myanmar. Ny tena marina dia biby eo amin'ny 450 eo no efa nafindra any amin'ny valan-javaboahary hafa any Nay Pyi Taw, renivohitra vaovaon'ny firenena. Niaro ny heviny  ny Ministra Soe Thein fa efa loza mandindona ho an'ny fahasalaman'ny vahoaka eo an-tanàna ilay vala. Nanampy ihany koa izy fa azo afindra any amin'ny Valan-javaboahary Nasionaly Hlaw Kar  izay any ivelan'i Yangon ity vala ity.
Nandefa fanentanana tamin'ny aterineto ireo mpampiasa aterineto mba hanakanana ity famindran-toerana ity. Nampatsiahy  ny manam-pahefana i Mahar Kyaung, izay naneho ny sary “Vonjeo ny Valantsika” tao amin'ny facebook, fa atao eny ampovoan-tanàna ihany koa ny valan-javaboahary any amin'ireo firenena hafa:
Toa sahala amin'ny maro ny mpampiasa aterineto no miombon-kevitra aminy. Naneho  [my] ny alahelony i Naing Lin Ngwehis:
Nanoratra  [my] feno fanarabiana i Yan Naung Soe :
Nizara  [my] ny hadisoam-panantenany i Zin Mar Lwin:
Nanainga  [my] ny manampahefana ny hanajanona ny fakàna tombontsoa tsy ara-dalàna i Yar Zar Di Yar Zar:
Satria moa tantanan'ny mpandraharaha matanjaka Tay Za  an'ny Htoo Trading ny vala amin'izao fotoana izao, dia nilaza  ny orinasa fa dia hanaraka ny baikon'ny fitondram-panjakana izy ireo mikasika ny olana eo amin'ilay famindran-toerana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/24/47002/
 Valan-javaboahary Yangon: http://en.wikipedia.org/wiki/Yangon_Zoological_Gardens
 Niaro ny heviny: http://elevenmyanmar.com/national/2341-minister-suggests-moving-zoo-due-to-smell-health-threats
 Valan-javaboahary Nasionaly Hlaw Kar: http://en.wikipedia.org/wiki/Hlawga_National_Park